Sexy ကျကျ body လေးနဲ့AOA က နတ်သမီးလေး Seolhyun ရဲ့ဖက်ရှင်လေးတွေ – FemaleWear.net
လူတိုင်းပြောပြောနေတဲ့ ဖက်ရှင်ကျတယ် ဖက်ရှင်မိတယ် ဆိုတာကို အကြိမ်တစ်ရာမက ကြားဖူးမှာပဲလေ။ ဖက်ရှင်ကျစေတဲ့အဝတ်အစားဆိုတာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လုံး, အဝတ်အစားပုံစံ တွေပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့။ သေးသွယ်တဲ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဖြူဖွေးတဲ့ အသားရေလေးတွေ စကတ်တိုလေးတွေလို့ပြောလိုက်ရင် ဘယ်သူတွေကိုသွားမြင်လဲဟင်?
သိမယ်လို့ထင်ပြီးသားပါ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက kpop အဆိုတော်ကောင်မလေးတွေကို ပဲပြေးပြီးမြင်ကြမှာပေါ့။ သေးသွယ်တဲ့ခြေသလုံးလေးတွေ ဖြူဝင်းတဲ့အသားရေလေးတွေ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်လေးတွေက ဘယ်လိုအဝတ်အစား ဖက်ရှင်ကိုပဲဝတ်ဝတ်လှနေမှာပဲလေ။ ဒီတော့ ဖက်ရှင်ဆိုတာ လှပတဲ့ body ပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်နေတယ်လေ။
အခုပြောပြချင်တာကတော့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကျော်အဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AOA အဖွဲ့က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖက်ရှင်အပြင် သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက်လေးကိုပါပြောပြပေးသွားမှာမို့ စိတ်ဝင်စားကြမယ်ထင်တယ်နော်။
အဲ့ကောင်မလေးကတော့ AOA အဖွဲ့က Vocal ကောင်းကောင်းနဲ့ အလှဘုရင်မလေး seolhyun ပါ။
GLAM.D ? #SEOLHYUN #설현 #AOA #에이오에이
A post shared by SEOLHYUN (김설현) (@seolhyun.aoa) on Jun 2, 2018 at 1:39am PDT
လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ ချစ်စဖွယ်မျက်နှာလေးနဲ့မို့ AOA ထဲမှာ သူ့ကိုလူသိပိုများပါတယ်။ အဆီမရှိကျစ်လစ်တဲ့ဗိုက်သားအလှကို ဖော်ပြထားတာမို့ ဖက်ရှင်ကတော့ ရေလည်လန်းနေပါတယ်။
180503 The 54th Baeksang Arts Award #SEOLHYUN #설현 #AOA #에이오에이
A post shared by SEOLHYUN (김설현) (@seolhyun.aoa) on May 27, 2018 at 2:12am PDT
AOA 5th Mini Album ‘BINGLE BANGLE’ Teaser 2018.05.28 Comeback
A post shared by SEOLHYUN (김설현) (@seolhyun.aoa) on May 16, 2018 at 9:53pm PDT
180601 Music Bank #SEOLHYUN #설현 #AOA #에이오에이
A post shared by SEOLHYUN (김설현) (@seolhyun.aoa) on Jun 1, 2018 at 6:09am PDT
ဘောင်းဘီတိုလေးတွေ စကတ်တိုလေးတွေကို ချစ်စဖွယ်ကောင်းအောင် ဖက်ရှင်မိမိဝတ်တတ်လို့ ပုရိဿတွေကြားမှာ ရေပန်းစားတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ Diet လုပ်နည်းကတော့ တကယ့်ကို ရိုးစင်းပါတယ်။ ကိုရီးယားကအနုပညာရှင်တွေက ဝိတ်ကိုအရမ်းထိန်းချုပ်ရာမှာ ကြောက်စရာကောင်းအောင် အံ့အားသင့်စေနိုင်ပါတယ်။ သူလေးကတော့ အဲ့လိုတွေအပြင်းအထန်ဝိတ်ချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာတဲ့အစားအစာတွေကို စားသုံးတာပါ။ သူ့ရဲ့ meal plan မှာ ကြက်ရင်အုံ, ကန်စွန်းဉ, ကြက်ဉ, ဒိန်ချဉ်နဲ့ အစေ့အဆံတွေကို စားသုံးပါတယ်လို့ JTBC’s show “Knowing Bros”မှာ ဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့် သူလေးဒီလောက်လှနေတာကိုး?
2018 Summer? #SEOLHYUN #설현 #AOA #에이오에이
A post shared by SEOLHYUN (김설현) (@seolhyun.aoa) on May 31, 2018 at 4:43am PDT
မိန်းကလေးဆန်ဆန်လေးနဲ့လည်း လှတာမို့တကယ့်ကို ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်လေးပါပဲနော်။
၁၉၅၀ ဖက်ရှင်တွေက တစ်ကျော့ပြန် ခေတ်စားလာဦးမှာလား?
ဖက်ရှင်တခုကြောင့် အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ First Lady Melania Trump